Inani lokuBala lokuBala
TikTok Ukubala imali
TikTok Umlandi Wevidiyo
* ENTSHA TIKTOK REALTIME UKUQHUTYELWA KWAMANDLA
Okufumaneka TikTokErs: @iqosweb @iamfanlalisa @yezikking
Isikhokelo: Indlela yokusebenzisa TikTok Realtime Live Follower Count?
yiya tiktok kwaye ufumane [email protected] owuthandayo tiktoki-er.
Emva koko yibeka kwiwebhusayithi yethu, kwindawo ethi "Khangela TikTok"
Cofa ungenise kwaye ujonge abalandeli bekhula kwaye behla.
Yonke yethu Tiktok Live Counts
* ENTSHA TIKTOK UKUPHILA NGONONO LONTO
TikTok Realtime Ukubalwa kwabalandeli
Tiktok realtime ubalo lwabalandeli sisixhobo esiluncedo kakhulu ukuba ufuna ukubona ukubalwa kwakho Tik tok abalandeli kwi real time. Uya kukwazi ukubona lonke inani phila Tiktok abalandeli kwaye sikhululekile ngokupheleleyo. Uya kukwazi ukuyibona bangabalandeli abaphilayo bomntu obathandayo or Tik TokErs kwaye sinezinye izixhobo ezinje:
Tiktok umqhubi comparisons kunye live countba
TikTok phila ubalo lokujonga
Okudume kakhulu Tiktok iividiyo
TikTok realtime: yintoni ekufuneka uyazi
Ngaphambi kokuba sifunde yonke into malunga TikTok realtime, masithethe ngembali yayo ngokufutshane. NgoSeptemba ngo-2016, ividiyo yevidiyo yomculo ebizwa ngokuba yi 'Douyin' yasungulwa e China.
Umxholo weli gama "kukuxhoma umculo". Nangona kunjalo, ngaphandle kwintengiso yaseTshayina, esi sicelo sibizwa TikTok kwaye inokukhutshelwa zombini iiplatifomu ze-Apple kunye ne-Android.
Yintoni i Tik Tok realtime iluncedo?
Esi sicelo senziwa ngenjongo yokuvumela abantu ukuba babhale phantsi kunye nokwabelana ngeenxalenye zomculo ezimfutshane. Ngamafutshane, uluntu lwaba yimpumelelo yokwenene. Konke oku ngenxa yokuba ifomathi yevidiyo yamkeleke kakuhle phakathi kwabasebenzisi kwaye kwangaxeshanye imele into enamandla kakhulu kwaye imnandi.
Yiyo loo nto ngonyaka ka-2017, Byedance, inkampani yaseTshayina yezobuchwephesha eyayenze esi sicelo yathenga iMusical.ly, eyayiluluntu oluxhaphakileyo phakathi kwabantu abancinci baseMelika abazalwa ngonyaka ka-2014 benenjongo efanayo kakhulu TikTok: ukunxibelelana iividiyo zomculo.
Emva kokuthenga, I-Bytyance ichithe inyanga ezininzi izama ukwenza ii -apps ezimbini njenge-unit enye. Kude kube nge-Agasti ka-2018, iapps yoMculo.okugqibela yadityaniswa kunye TikTok. Yiloo nto le ndawo intsha ikhule ngokukhawuleza, isuka kwizigidi ezili-100 iye kuthi ga kwi-130 lezigidi zabasebenzisi kwisithuba seenyanga ezintathu.
Ukusetyenziswa kwayo akuhlukile kakhulu kunolunye uluntu. Ukuqala, kufuneka ukhuphele isicelo kunye nerejista ukuze uqale ukulayisha iividiyo. Ubuncinci beminyaka yobhaliso yiminyaka eyi-13 kwaye udinga imvume yokuba ngumdala.
Kwisikrini esikhulu, ungabukela iividiyo ezithandwa kakhulu okanye ezona zisisihlwele osilandelayo. Kukho iphepha lokukhangela lokukunceda ufumane iividiyo ezintsha, abantu abathile, okanye ii-hashtag ezibhenela kuwe.
Emva kokubukela ividiyo ungadlala nomsebenzisi ngokumnika okufanayo, ukumlandela, ukusabalalisa iklip yevidiyo yakhe, okanye ngokuthetha.
Ngakumbi malunga tiktok realtime
Isicelo sinezinto zokurekhoda kunye nokuhlela izixhobo zevidiyo ukuze ukwazi ukurekhoda iiklip zakho. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ubude beevidiyo bufutshane. Kwiwebhusayithi yethu, ungabona abalandeli behla benyuka ngexesha langempela, oku kubizwa njalo Tik Tok realtime isixhobo.
Phambi kokurekhoda, ungasebenzisa isihluzo osifunayo, kwaye kamva uguqule ividiyo yakho ngokongeza iziphumo, umculo wangemva, okanye ukhethe iashots.
Kude nokurekhoda iividiyo zakho, isicelo sikwenza kube lula kuwe ukwenza iividiyo zesilayidi kulungelelwaniso lweefoto ozikhethayo.
Kwimeko yale nethiwekhi kunye nenjongo yayo yoluntu, imangalisiwe ngokungangqalanga kwayo, inxulumene nokurekhodwa nokwabelana ngeevidiyo kunye nomculo.
Ukuba ufuna uncedo nge Tik Tok Realtime, ndiyacela Cofa apha Ukunxibelelana nathi kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.
Konke malunga TikTok realtime
Oku kudibana kwabancinci kuyonwabisa. Unje ngomdlalo kwaye unomdla kubantu abancinci.
Emva koko ivelise ukwamkela iipropathi ezikhululekileyo ngevidiyo emfutshane njengeyona ndlela ikhethekileyo. Ngabakhuseli ngokwabo kwaye babasasaze, banxulumene okanye bangamameli. Kwakhona, ihlala ihamba kunye neempawu ezibonakalayo ezininzi ezilula ukuzisebenzisa kunye nomdla omkhulu.
Ikwavumela ukuba uzame umsebenzi onomda ngaphandle kokubhalisa. Oku kunciphisa isithintelo sokungena kwaye sikwanayo nenkqubo ehlaziyiweyo yokufumanisa ukuba zeziphi iintlobo zomxholo esifuna ukusihlutha kwaye sizinikezele kuthi.
Kubalulekile ukuqonda ukuba, okwangoku, ayiphindaphindwa kakhulu ngabantu abadala kwaye, ngenxa yoko, inomdla ngakumbi kubantu abancinci abavakalelwa kukuba yintsimi yabo. Rekhoda, uguqule, unxibelelane, kwaye usebenzise isiqulatho sokwamanyala esiqhelekileyo. Ilula kwaye imnandi.
Unokonwaba kwakhona TikTok follower count
Ukuba sinikela ingqalelo kwimixholo yayo, TikTok realtime inika amava okonwabisayo. Ixhasa ukukhangela okunamandla kwaye inika umxholo omfutshane, kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ukubukeka okunomdla, kunye nesixhobo somculo esinamandla.
Ngaphandle koko, Tik Tok ine "izixhobo eziyimfihlo" enamandla kakhulu: ialgorithm yayo. Ibonisa ukutya okunomxholo ohambelana nembali yakho yangaphambili yokusebenzisa, idatha ekufutshane efana nendawo yakho, okanye ixesha losuku, kunye neziqwenga ezaziphumelele phakathi kwabantu abafana nawe.
Oku kutya kuboniswa ngokungagqibekanga, kuthatha indawo ephambili ukondla kwabantu obalandelayo, kwaye kwenza kube lula kakhulu kuwe ukuba urhwebe kwividiyo emva kwenye.
Kude ekucebiseni umxholo osekwe kwiividiyo kuphela kwaye unempawu zomdlalo oqinisekileyo, ingcali ikhomba eminye imihluko emibini ebalulekileyo malunga nolunye uluntu olufana ne-Twitter, i-Facebook, okanye i-Instagram:
Ngelixa kwezinye iinethiwekhi sibonisa ezona "zinto zethu" zintle, indlela esimhle ngayo, indlela ezinomtsalane ngayo iiprojekthi zethu kunye nokonwabisa abahlobo bethu, Tik Tok Iqela liza kubonakalisa italente yabo, ndiyayithetha loo nto, ukuba bayazi kakuhle ukuba bangayenza njani na kakuhle: nokuba ngaba kukuxela, ukudlala iziqhulo, ukudlala, ukudanisa okanye nantoni na onokuyicinga.
vuyela TikTok real time abalandeli
Tik tok kukuzisela ezinye iindlela zokulinganisa inqanaba lokuzibandakanya onokuba nalo nabaphulaphuli bakho. Umlandeli wexesha lokwenyani yintsimbi evumela ukuba ujongano lwazi ukuba abaphulaphuli banxibelelana njani neeakhawunti ezahlukileyo ngale ndlela ukwakha ukutya ngokokhetho nokukhethwa komsebenzisi ngamnye.
Abalandeli bexesha lokwenyani banokuma bagqale ezinye iimveliso ezinokujonga iiprofayili ezithandekayo ukukhuthaza. Ke ngoko, kunye nabalandeli bexesha lokwenyani, unokufumana udumo ngaphakathi eluntwini kwaye kwangaxeshanye, ubonwe ziimpawu ezithile okanye abaxhasi abanokuguqula ubomi bakho ngonaphakade.
Iinkcukacha zokugqibela malunga nale metric kukuba lonke uqikelelo lwakho lwenziwe ngexesha-lokwenyani, eliza kunika umbono ochanekileyo kumsebenzisi ngamnye ukubona indlela yokuhamba kweakhawunti nganye abayilandelayo.
Discover TikTok phila ukubalwa kweentliziyo
TikTok Realtime ikwabonelela TikTok Hlala ukubala kweentliziyo. Iyafana neyangaphambili kodwa ngumahluko obalulekileyo ngokubhekisele ekusebenzeni kwayo. Le isebenza ikakhulu xa umsebenzisi ephila kwaye angabona lonke unxibelelwano okanye iintliziyo azifumanayo njengabantu ababukele iividiyo zakhe.
Ke ngoko, imfuneko ekhoyo kwaye ebaluleke kakhulu yokuba neentliziyo ezininzi kule nethiwekhi yentlalo kukwazi ukwenza umxholo osemgangathweni ungcamle bonke abasebenzisi.
Eli yinxalenye ebaluleke kakhulu kuyo yonke inkqubo kuba iintliziyo zezona ziya kukwazi ukuxela i-algorithm ukuba i-akhawunti yakho ibalulekile kwaye ke kufuneka ubekwe phakathi kweyona kujongiweyo.
Olu lolunye uncedo olunikezelwayo yinethiwekhi yoluntu yokuba umxholo ogqibeleleyo uya kuhlala ufumana iintliziyo ezininzi kwaye ukusuka kubalandeli abayi-1000 ungaqala ukufumana imali ngalesi sicelo kwaye ubone ukuba kumnandi kangakanani.
Khumbula ukuba iintliziyo zezona zizokulinganisa ngokuthe ngqo ukuba zingaphi ukutyelelo onazo kwaye baxelele ialgorithm indlela yokudibana kwabo nabaphulaphuli.
Ukuvelisa ezi ntliziyo, kufuneka ujonge kuhlobo lomxholo oza kuwenza. Ke ngoko, isincomo sinokuba kukujonga umda wexesha leeakhawunti ezithile onomdla kuzo kwaye ubone ukuba loluphi uhlobo lwesiqulatho esenziwa ziiakhawunti kwaye sikwazi ukuxelisa olu hlobo lokuziqhelanisa.
Tik Tok inomlinganiswa ongaziwayo kakhulu kunamanye amanethiwekhi, njengoko isihlwele singakhi i-akhawunti yokuncokola okanye ukudlala nabahlobo, kodwa ukufezekisa ukubonakala okukhulu kwiividiyo zabo. Ngamanye amagama, ayibalulekanga kangako malunga nonyango lomntu kunye nokubuyiswa okubonakalayo kwezinye iindawo zoluntu. Nceda ujonge eyethu Tik Tok umlandeli comparison isixhobo.
Ngokuphathelele kubhaliso, kwaye njengoko kusenzeka ngesinye isicelo okanye uluntu, kufuneka sinike ukulandelelana kwedatha yobuqu eqokelelwa yinkampani, iphathe kwaye, njengoko sinokufunda kwiwebhu yayo: "yabelana nababoneleli beenkonzo bangaphandle abasinceda ekucebiseni. isinxibelelanisi, kubandakanywa ababoneleli bokubamba amafu. Ukwabelana ngolwazi lwakho ngamaqabane oshishino, ezinye iinkampani kwiqela elifanayo TikTok Kunye neenkonzo zokumodareyitha komxholo, ababoneleli bemilinganiselo, ababhengezi bezentengiso, kunye nabanikezeli bohlalutyo ".
Ulwazi oludingayo ukubonelela iakhawunti ligama lomsebenzisi, umhla wokuzalwa, i-imeyile kunye / okanye inombolo yefowuni, ulwazi oluchazayo kwiprofayile yakho yomsebenzisi, ngaloo ndlela yifoto yakho okanye ividiyo.
Tiktok phila umlandeli comparison
Khumbula ukudlala nabaphulaphuli bakho. Qiniseka ukuba uphendula kwiikhomenti ezishiywe sisihlwele kwiividiyo zakho. Kubonakala ngathi kukusebenza nzima kodwa kwenza abalandeli bakho bacinge ukuba bayakukhathalela kwaye banikele ingqalelo kuwe. Khumbula ukuba uhlala uphantsi comparison.
Yiyo loo nto kukho Tiktok phila umlandeli comparison lonto inceda abasebenzisi bazi ukuba yeyiphi iakhawunti eyona nto ibandakanyekayo. Kuyanceda ukwenza ukuba abasebenzisi babe nomdla kwaye uqale ukukulandela… okanye ukulandela okhuphisana naye.
Cinga ngokuthwala ixesha ngamaxesha kwaye unxibelelane nabalandeli bakho ngelixa usasaza. Yabelana ngeenxalenye zobomi bakho ukuba uyakuvuyela ukunxibelelana.
Okukhona becinga ukuba bayakwazi, kokukhona baya kuziva ngathi kunye neevidiyo zakho. Ukwenza umculo ophilayo kunokuba yinkohliso, kodwa ukuba uziva unethemba lokuwenza, abalandeli bakho baya kuwuthanda.
Kwelinye icala, ungasebenzisa iiseshoni ezibukhoma ukuxoxa ngezihloko ezinomdla kubalandeli bakho, ubambe umbuzo kunye neseshoni yokuphendula, kwaye ngamanye amaxesha uneendwendwe kwiividiyo zakho.
Uninzi lwabantu luqala ekuqaleni Tik Tok ngenani elilinganiselwe ngohlahlo-lwabiwo mali, izixhobo, kunye nobuchule. Ngalo lonke ixesha, kuya kufuneka ukwazi ukuphucula izakhono zakho, kwaye ngethemba, xa ulawula ukwenza imali, ukwazi ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali kunye nezixhobo zingcono.
Isitshixo sempumelelo ku Tik Tok Uvelisa ividiyo enentsingiselo ephezulu. Kuya kufuneka uchithe ixesha ufunda izakhono eziphambili zokwenza ividiyo ngempumelelo. Zama ukwenza ividiyo nganye ngcono kunale yangaphambili.
Oku kubalulekile ukuba ufuna ukutshabalalisa ukhuphiswano lwakho kunye Tiktok phila umlandeli comparison.
Fumana okungakumbi TikTok realtime
Thatha isithuba se TikTok Ikhawuntari. Funda ukuba ungawenza njani umxholo osemgangathweni kwaye ukonwabele zonke izibonelelo eziziswa yile nethiwekhi.
Ukusuka ekufakeni ividiyo emnandi ukuya ekufumaneni ingqalelo ye-brand. Ungayenza yonke le nto ukusuka kwintuthuzelo yeselfowuni yakho ngokwabelana ngayo yonke into oyithandayo. Ukonwabele nganye yeempawu kunye nomsebenzi ekuzisayo kuwe.
kunye TikTok counter, ungaphila kwaye ubothuse abaphulaphuli bakho ngazo zonke iingcinga zakho kunye nobuchule.
Sebenzisa ithuba lokwazi ukuba uhamba njani nabaphulaphuli bakho kunye nento ekufuneka uphucule ngayo TikTok follower count. Khawuleza ukhwele ileli ethandwayo kwaye uqhekeza oko TikTok follower count.
Beka zonke izimvo zakho ekusebenzeni kunye nokwenza ividiyo eyahlukileyo enokuthi ichaphazele wonke umntu. Enkosi ngezixhobo ezifana TikTok real time abalandeli, TikTok phila ukubalwa kweentliziyo kwaye TikTok phila umlandeli comparison. Fumanisa ukuba i-algorithm isebenza njani kwaye uyibeka ekusebenzeleni kunye nokuba ufumane imali ngayo Tiktok realtime.
Kwakhona, uya kufuna ukuguqula ipateni engaguqukiyo ukuze abaphulaphuli bakho bazi oko bakulindeleyo kuwe. Akukho sizathu sokuba "yimpumelelo edlulayo". Ukuba isihlwele siyazi ukuba ulindele uhlobo oluthile lwevidiyo rhoqo ngoLwesibini nangoLwesihlanu, baya kuqala ukulinda kwaye babuye TikTok ngezo ntsuku ukubukela ividiyo yakho yakutshanje.
Kwaye, kunokwenzeka ukuba baxelele izihlobo zabo ngawe, zenze abaphulaphuli bakho bandise ngakumbi.
Ungaphoswa yinto yonke TikTok realtime kufuneka inikezele
Unokufuna ukuqaphela ukongeza i "slice sobomi bakho" iividiyo zakho eziphambili. Oku kunceda abaphulaphuli bakho ukuba bazi kwaye bakuqonde ngcono. Ngenye indlela, unokuqhuba iibhloko kunye neevidiyo zakho ezininzi (ezaziwa ngokuba ziiVlogs).
Ngokufanelekileyo, ufuna zonke iividiyo zakho ze-niche zikhangeleke kwaye zivakale ngokufanayo: ufuna ukwenza isitayela sakho. Oku kuyinyani nokuba wenza ividiyo ngokuvumelanisa ngemilebe phambi kwekhamera. Zimbalwa zokuqala Tik TokI-ers sele iqalile ukwenza iividiyo zokuvumelanisa ngemilebe, kodwa uhlobo lweengoma abazikhethileyo, kunye nendlela abazenza ngayo ezi vidiyo, zabenza babonwa.
Ukuba awulayishi ividiyo yomculo, ufuna ukubalisa ibali ngelizwi lakho kunye nesitayile sakho. Unokuba neenxalenye ezifanayo kwividiyo nganye okanye urekhode iividiyo ngendlela efanayo.
kuyo yonke le nto nangaphezulu, vula iakhawunti ngaphakathi Tik Tok kwaye wazi zonke iimpawu zayo. uyonwaba ngayo yonke into onokuyenza ngayo TikTok.
Ngaphandle koko, unokuzibona iinkonzo ezinikezelwa kule webhusayithi ukuphucula ukusebenza kwakho kule nethiwekhi yentlalo. Yonwabele i-craziness yabasebenzisi bayo kunye nokwabelana ngomxholo womgangatho.
Yandisa ukuthandwa kwakho kwaye ube yinxalenye ye Tik Tok inyani.
Njani TikTok Realtime Ukubala komlandeli kuyasebenza?
Ngaba Live count TikTok Realtime Umsebenzi wokubala umlandeli? Kutshanje kukhutshwe, le nto yasimahla (okomzuzwana) yenza kube lula ukufumana amanani abantu kunye neempembelelo ngaphakathi TikTok.
Kwakhona, inika iipropathi ezininzi ezikhangayo kunye namanyathelo.
The Livecount Tik Tok Uluntu lolona bonxibelelwano lunamandla kakhulu kumaxesha akutshanje malunga nokuveliswa komxholo kunye nabantu.
Yonke le nto, ukuya kuthi ga ekubeni i-Instagram iphonononge ukusebenza kwayo ukuyiphindaphinda. Livecount Tik Tok Uyathandwa ngabantu abangakumbi abakwishumi elivisayo.
Ngokungathandabuzekiyo iyiguqula ibe luluntu ekufanele ukuba lufundwe ngentengiso kunye iingcali zonxibelelwano.
Ukungakwenzi oko kukuba nendawo engaboniyo kwimikhwa kunye nemikhwa yabasebenzisi abangaphantsi kwe-16.
Ngawaphi amanyathelo okuqala e TikTok?
Uyilo kunye neefomathi azisoloko zinomdla, kwaye asisoloko siqonda ukuba zenza ntoni livecounts TikTok yanelisa kakhulu kwizigidi zabantu abathanda isicelo.
Kodwa amanyathelo akhona. Iifomati ezikhethekileyo zevidiyo ziphuhlisa izigidi zeembono kunye nobudlelwane ukuya kwinqanaba lokwenza iindlela ezandayo kwezinye iinethiwekhi zentlalo.
Ababhali bokubhaliweyo abatsha kunye nabaphembelelayo bayabonakala naku livecounts TikTok.
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, ubungakanani, uqheliselo, kunye nokusetyenziswa kulapho kwaye kusetyenziswa ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwezinye iimpawu.
Njengokuhlalutya kunye nokujonga izinto zolunye uluntu, iimveliso zewebhu ziyavela. Benza oku ukuphanda iiprofayili zabasebenzisi kwi TikTok Sicelo.
Siye savelisa izixhobo ezingakumbi ezifana tiktok isixhobo sokubala imali kwaye tiktok umxhasi wevidiyo. Ke, yizame kwaye usazise ukuba ucinga ntoni ngezi zixhobo zintsha.
Fumana izibalo kunye compare Iiprofayili nge Live count TikTok Counter Umlandeli Bala
Unxibelelwano kuluntu lunokwenziwa ngokudala imixholo ebhalwe uphawu. Ukongeza, ngokusebenzisa ababhali bomxholo abayaziyo iikhowudi kunye nokubonakala kokuthanda kunye noxanduva olubalulekileyo.
Livecounts TikTok umahluko kulo mthetho. Nangona kunjalo, akukho nani elikhulu lezixhobo zokuphanda kwaye compare iiakhawunti kwi livecounts TikTok.
TikTok ukubala komlandeli sisixhobo sokwenza uphando, ukulinganisa, kunye nokuthelekisa amanani abantu abakwi TikTok abaneprofayili yoluntu.
Kusimahla okwangoku, ngena nje ungene kwiwebhusayithi yabo ukufikelela kwinkonzo.
Ukuza kuthi ga namhlanje, indawo yokusebenza ifuna ukubonisisa ngaphezulu kweeprofayili ezingama-7,803 livecounts TikTok.
Ukuba iprofayile ayikho kwibhanki yolwazi, kunokwenzeka ukuba uyongeze kwaye uyibeka kwindawo yokuqhubeka yeakhawunti.
Uninzi lweempawu zohlalutyo lweprofayili livecount TikTok ukuthelekisa iakhawunti
Ukuba uyiarhente okanye uphawu, i -backback iyafana. Ukuba kuya kufuneka ndenze uhlahlo-lwabiwo mali lwe-influencer, ndenza oko ngenxa yokuba kukho ukungangqinelani kwimveliso yabo kunye noko kuchazwa luphawu lwam.
Nangona kunjalo, ndifuna ukukhetha ezona profayili zibalaseleyo ngokunxulumene nezibalo, phakathi kwazo zonke iiprofayili ezikhethiweyo.
Ingaba yin livecount TikTok realtime live follower count njonga i?
Nabanyuliweyo TikTok iprofayile, sifumana ifayile yeenkcukacha manani kwiakhawunti.
Ngaphandle kwamanyathelo aqhelekileyo, kuthathelwa ingqalelo inani labalandeli, abalandeli, ukuthanda kunye nevidiyo ethunyelweyo.
Ukongeza, sifumana ukuvela kwesilinganiselo sababhalisi kwaye ndiyayithanda ngexesha lexesha langempela.
Enye idatha enomdla yokuphanda TikTok Iiprofayili, iintsuku ezingama-30, ezingama-60, iingqikelelo zeenyanga ezi-3, njl njl yabanye abalandeli kwaye ndiyayithanda.
The livecount TikTok isixhobo sohlalutyo lweenkcukacha manani sikwabonelela ngokukhetha iziqulatho ezi-8 zeprofayili yohlalutyo. live count TikTok realtime live follower count ikwabonisa igrafu yokuvela kwezinto ezithandwayo kunye nezimvo kwi TikTok iividiyo ngalo lonke ixesha.
Iprofayili ikhutshelwa ngaphandle ngokupheleleyo kwiPDF. Ilungele ukwamkelwa. Umsebenzisi ngamnye unokubekwa kwiintandokazi kwaye emva koko afumaneke ngokulula kwaye ahlolwe ngexesha.
Okokugqibela, into oyisebenzisayo inika ithuba lokuthelekisa ezimbini live count TikTok profiles: Kwanele ukukhetha abantu ababini ukuze ufumane a comparison itafile.
TikTok ngoyena mntu mkhulu kunxibelelwano lwasentlalweni
Ngo-2016, inkampani yabezorhwebo i-ByteDance yasungulwa TikTok (ibizwa ngokuba nguDouyin ngesiTshayina), isicelo esenza kube lula ukwenza iividiyo ezili-15. Umsebenzisi ukhetha ingoma aze azirekhodishe.
Ngo-2017, i-ByteDance yathenga iMusical.ly, isicelo esifanayo sobuvulindlela, sakhiwe ngo-2014.
In TikTok, ke, ungasasaza iividiyo ngokudlala kwakhona (i-lip-sync ukuya kuthi ga kwimizuzwana engama-60). Kwakhona, unokufota, uguqule, kwaye unxibelelane neziqendu zakho.
Ukongeza, unokongeza iifilitha, izitikha, iimaski ezi-ntathu (isitayile se-Snapchat). Silapho kwaye sizilinganisa ngokwe-hashtags.
Nge-Agasti ka-2018, usetyenziso lwadityaniswa kwaye endaweni yalo lwafunyanwa iMusical.Ly, ukugcina zonke iiakhawunti kunye nomxholo.
TikTok Realtime Ehlabathini lonke
Abasebenzisi abasebenzayo kwaye TikTok zokulanda
TikTok ibango labasebenzisi abazizigidi ezingama-800 abasebenzayo ngenyanga kwihlabathi liphela ukusukela ngoJanuwari ka-2019 (izigidi ezingama-700 ngoJuni ka-2018).
Isicelo sele sikhutshiwe amaxesha angama-1.27 ezigidi zehlabathi kwihlabathi liphela (1). Ukususela nge-2018 kaJuni ngo-XNUMX, inani lokukhuphela liye laphindeka kabini.
Sisicelo sesine esilandwe kakhulu (ngaphandle kwemidlalo) ngo-2018, ngasemva kweWhatsApp, uMyalezo, kunye noFacebook, kwiSicelo seVenkile kunye noGoogle Play.
Ikwasisicelo sokuqala kwiqonga leqonga le-Apple kwisiqingatha sokuqala sika-2018.
TikTok kufikelelwe kwi-56.7 yezigidi zokukhuphela ngokutsha ngoJuni ka-2019 (nangona kunjalo, iipesenti ezisi-7 ngaphantsi kunango-2018).
NgoJanuwari ka-2019, iipesenti ezingama-43 kwezi zintsha TikTok Ukhuphelo lubekwe e-India kunye ne-9% e-USA.
Kwikota yokugqibela ye2019, live count TikTok yayisesesibini isicelo sokukhutshelwa kwihlabathi liphela ngokufakelwa ngaphezulu kwezigidi ezili-176, emva kwe-WhatsApp (izigidi ezili-184).
Livecount Tik Tok Ndizuze i-110 yezigidi zabantu abatsha kwisiqingatha sokuqala sika-2019.
TikTok iyasebenza kumazwe ali-150 kunye neelwimi ezingama-75. I-India, ilizwe lokuqala ukusebenzisa TikTok, bakhona ababhalisile abayi-200 yezigidi kunye nabasebenzisi abazizigidi ezili-100 abasebenzayo ngenyanga.
Ubalo lwabantu kunye nokusetyenziswa kwe live count TikTok ngabanye
Iinkcukacha zedatha yesicelo seZibheno live count TikTok abantu kule planethi bajolise kulutsha oluneminyaka eli-10 ukuya kweli-19 ngokulandelelana kwiminyaka engama-20 ukuya kwengama-29.
Kukholelwa ukuba i-40% ye TikTok Abantu kwihlabathi liphela bakwiqela elineminyaka eli-16 ukuya kweli-24.
Abantu behlabathi lonke bachitha umndilili wemizuzu engama-52 ngosuku kwisicelo (8). Ukongeza, umsebenzi nge TikTok kukholelwa ukuba ngama-29% e-USA. Oku kuthathwa apha njengenxalenye yomntu ngamnye ngenyanga ngabantu bemihla ngemihla. Iya kuba sezantsi kakhulu compared kwi "abakhuphiswano" kwi-Facebook (i-96%), i-Instagram (95%), iSnapchat (95%), okanye iYouTube (ikwayi-95%).
Imali ye Livecount TikTok ukubala okulandelayo
I-ByteDance, TikTokInkampani yabazali ixabisa amawaka ezigidi ezingama-75 zeedola, ukuyenza, ngo-Agasti ka-2018, eyona nto ibaluleke kakhulu kwihlabathi, phambili kuka-Uber (amawaka ezigidi ezingama-72). I-ByteDance, kunye neapps TikTok kunye neToutia, sele inabantu abazizigidi ezi-1.5 zehlabathi kwaye kufuneka ifikelele kwiibhiliyoni ezili-13 zeerandi ekungeneni kulo nyaka.
Bathi i-ByteDance inika i-20% yemivuzo ephezulu kune-Facebook kubasebenzi base-US
Inkampani inengeniso ye-50 ukuya kwi-60 yezigidi zee-yuan, okanye i-7 ukuya kwi-8 yezigidi zeedola, ngo-2018.
Kodwa injongo entsha ye-2020 ijonge phezulu, kwaye okwangoku inengeniso eyi-120 yezigidi ze-yuan ngo-20209 (US $ 16.7 yezigidigidi). Ukongeza, inokubakho kwimveliso kwisiqingatha sesibini sika-2020.
TikTok Ngezakufumana umvuzo ongaphezulu kwe- $ 10.8 yezigidi ngoJuni ka-2019 kunye nabantu abachitha imali kwi-interface eyodwa (ukunyuka nge-588% ngonyaka omnye). AmaTshayina ngabantu ababalise iipesenti ezingama-69 zenkcitho yesicelo ngoJuni ka-2019. Ngoku siza kukuxelela indlela yokuvula ixesha lexesha lokwenyani TikTok iimetwork, kunye ne TikTok Follower Comparison.
Yenza impilo e Livecount Tik Tok
Ukwenza usasazo olubukhoma ngaphakathi TikTok, iinkqubo eziza kwenziwa ziyafana nevidiyo eqhelekileyo.
Nangona kunjalo, kukho into enye ekufuneka uyigcine engqondweni. Asinguye wonke umntu onokuthi enze usasazo olubukhoma.
Nokuba ku livecount Tik Tok ayibonisi, kufuneka ngaphezulu kwabalandeli abayi-1,000 XNUMX ukunxibelelana nevidiyo ephilayo.
Inani lingahluka ngokwamazwe, kodwa kuya kufuneka uqonde ukuba okwangoku enye indawo inyiniwe kwiiprofayile ezimbalwa.
Ukuba ucinga ukuba unabalandeli abaneleyo bokuhambisa ividiyo ngokudluliselwa, landela la manyathelo alandelayo:
Inyathelo 1: Faka isicelo.
Emva koko, inyathelo 2: Jonga i-icon esemazantsi yoyilo.
Inyathelo 3: xa uphambi kombono wekhamera, inqaku elidlulileyo lokudubula ividiyo, nikela ingqalelo kwisicatshulwa esingezantsi kwekhonkco elibomvu lokudubula. Ngokwenza intshukumo esecaleni, unokutshintsha usukele kwiVidiyo uye kwiPhila.
Inyathelo 4: Yithiya imovie yakho kumgca ongezantsi kwekhonkco ebomvu-lumka ungasebenzisi intetho engavunyelwanga okanye awuzokwazi ukwenza ifilimu!
Okokugqibela, inyathelo lesi-5: Emva koko cinezela ikhonkco lokurekhoda (Yiya Live iya kubhalwa) kwaye usasaze bukhoma ngokugcina umnwe wakho kuyo. TikTok counter sisixhobo esiluncedo kakhulu.
Ukuba ufuna ukufezekisa ukuthunyelwa okubukhoma, konke kuyehla ukuze ube nenethiwekhi eyamkelekileyo yoluntu kunye nokulinda isicelo esifanayo ukubonelela ngenye indlela ngendlela emiselweyo.
Sicinga ukuba isiseko esiyinkimbinkimbi sokuba nezigidi zabantu kwi-Intanethi sisiseko esingxamisekileyo sokucebisa lo msebenzi kubo bonke abantu.
Yongeza iziphumo kwiividiyo kwi TikTok kuba TikTok counter
Xa urekhoda iividiyo ngaphakathi TikTok kunye negajethi yakho ye-smartphone, unokongeza iividiyo kuzo ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo, enye ngaphambi kokurekhoda ividiyo yakho, kunye emva kokuba uyidubule.
Nangona kunjalo, iziphumo ezifikelelekayo azifani kuzo zombini iinkqubo.
Ukurekhoda ividiyo kunye nokusebenzisa iziphumo ngaphambili, ukuze uzibukele ngaxeshanye ngelixa usenza umboniso bhanyabhanya, nantsi into ekufuneka uyenzile:
Okokuqala, inyathelo 1: Vula isicelo.
Inyathelo 2: chukumisa ikhonkco + kwicala elingaphantsi ukuze uqhubeke kwikhamera.
Inyathelo 3: kwikona esezantsi ekhohlo, cofa kwiZiphumo.
Ngoku, inyathelo 4: khetha isiphumo kwezi zifumanekayo. Kukho amacebo okucoca, inja kunye nekati, iipateni zekratshi, izihloko ngemiphumela, njengeKrisimesi, iziphumo ezidumileyo ... khetha enye.
Inyathelo 5: dubula ividiyo yakho.
Ukuba ufuna ukusebenzisa iziphumo kwividiyo esele inefilimu, iinkqubo ekufuneka zenziwe zahlukile kancinci:
Inyathelo 1: faka isicelo,
Inyathelo 2: Yiya kwikhamera ecaleni + komda osemazantsi.
Ngoku inyathelo 3: tyhila ividiyo yakho.
Inyathelo 4: kwiwindo yokujonga, yiya kwindawo eziPhakamileyo. Ukongeza kwiimpembelelo, kuya kubakho iifilitha kunye nezitikha.
Inyathelo 5: khetha phakathi kweefilitha okanye ixesha lokujongana nexesha elingaphantsi
Qhubeka nenqanaba lesi-6: cinezela nje isiphumo osithandayo. Iziphumo ziya kongezwa kwividiyo lo gama nje ushiya umnwe wakho esikrinini.
Inyathelo 7: Emva koko unokugcina iziphumo ezongeziweyo kwi Gcina enye.
Inyathelo 8: Thepha okulandelayo kwikona engezantsi ngasekunene, bhala isicatshulwa esilandela ividiyo, kwaye upapashe ngokuqhelekileyo.
Ngqamanisa imilebe yakho ngaphakathi TikTok follower count
Ukutshatisa imilebe yakho TikTok Ukuthelekisa intshukumo yakho kakuhle kunye nesingqisho somculo, kuya kufuneka wenze oku:
Inyathelo 1: fikelela usetyenziso kwaye ucinezele ikhonkco lokudubula ividiyo entsha.
Inyathelo 2: Khetha ingoma okanye isandi oza kusisebenzisa ngokucinezela inowuthi yomculo ephezulu kwisikrini ngesicatshulwa. Yongeza isandi kwaye uya kukwazi ukubona zonke iingoma ezifikelelekayo okanye ukungenisa ifayile yeaudiyo kwi-Android yakho.
Qhubeka nenqanaba 3: Buyela kwimifanekiso yokurekhoda ividiyo. Kwiisetingi ezifikelelekayo kwicala lasekunene, kukho inqaku kunye nesikrini icon. Cinezela ukuze ubone ukuba yintoni ekufuneka ikhutshiwe kwingoma oyikhethileyo. Xa unayo, cofa ikhonkco kunye nesheke ukuze ubuye kwiscreen preview.
Inyathelo 4: Ngelixa ucinezela ikhonkco elibomvu, usetyenziso luya kudlala ingoma kwaye lufayilishe kwangaxeshanye. Unokwenza izilungiso, kodwa ekuqaleni, kuya kufuneka usebenzise ukuqonda kwakho isigqi ngokusemandleni akho, kwaye ukuba ulungile kwi-karaoke, nokuba ngcono.
Inyathelo lesi-5: Xa ukhulula ikhonkco lokurekhoda, uya kuya ngqo kwicala levidiyo efilimweyo. Ukuba unikela ingqalelo kumphezulu wesikrini, uya kubona i-icon efanayo yomculo kunye nesikere, uyichukumise.
Okokugqibela, inyathelo 6: Njengangaphambili, okwangoku, ungahambisa isikhombisi kumda wexesha lengoma. Dlala ngale paramente ukwenza umculo utshatise intshukumo yemilebe yakho ude ufikelele kwisinxibelelanisi esifanelekileyo.
Amagama okugqibela malunga TikTok realtime live count
Njengoko sele sikuxelele, kuya kufuneka uchithe ixesha lakho ubambe isingqisho ngexesha lonke lokurekhoda ukwenza olu phuhliso lube lula.
Enye indlela ngaphakathi kokufikelela kwakho ongayifumana iluncedo kukurekhoda kwi-agility enkulu okanye encinci. Ukuba ufumanisa ukuba iividiyo zikhawuleza kunawe okanye ziyacotha, ungasebenzisa izantya ezahlukeneyo zokurekhoda. TikTok Realtime ku kunceda.
TikTok Abalandeli beXesha leNene
Livecount Tik Tok Luhlobo olukhulayo losasazo loluntu, kwaye ukuba uyinxalenye ye Livecount Tik Tok ekuhlaleni, emva koko TikTok follower count inokuba sisixhobo esiluncedo kuwe. Ungawabona onke amanani akho kunye namanye TikTokabalandeli baka-er ngexesha lokwenyani. Ungayisebenzisa le nkonzo naphi na, nangaliphi na ixesha, kwaye ngaphandle kwendleko. Iya kukwenza ukwazi ukukhangela ukubala kwabalandeli bakho obathandayo TikTokImpembelelo kunye nexesha elifanelekileyo. Ungasebenzisa oku ukwenza comparisons, jonga amanani, kwaye ujonge ezona zaziwayo TikTokukuze ufumane umxholo omkhulu kubo kwaye ufumane izimvo ezintsha kwiividiyo zabo.
Oko okumele ukwazi ngako TikTok kwaye TikTok counter
Ngaphambi kokuba siqale ukuchaza yonke into malunga TikTok counter, makhe sijonge imbali TikTok. Yaphehlelelwa ngoSeptemba ngo-2016 njenge-app yevidiyo yokwabelana ngomculo, ebizwa ngokuba yiDouyin eTshayina. Umbono ongemva kweli gama ngokufanelekileyo wayethetha “njengokuwushukumisa umculo.” Kodwa, njengoko bekhula, baba ngaphandle kwe-China, igama lesicelo latshintshela ekubeni ngu TikTok, kwaye yayikhutshelwa kwiiVenkile zombini iinkqubo zokusebenza (okt, Android kunye ne-iOS).
TikTok yenziwe ngombono wokurekhoda nokwabelana ngeevidiyo ezimfutshane ngomculo wangemva ongezelelweyo kuzo. Lo mbono uphumelele kakhulu kumagama alula, kwaye abantu baqala ukulandela zonke iindlela zakutshanje TikTok. Kwakunokwenzeka kuphela ngenxa yokuba ifomathi yeevidiyo yayinokonwabisa kakhulu, ichitha ixesha elincinci, kwaye kulula ukuyisebenzisa ujongano lokuhlela ividiyo kunye nokukhethwa komculo ongasemva. Uluntu oluncinci lwakwamkela njengendlela yokuzihlaziya. Yayingeyonto intsha, iividiyo nje ezimfutshane ngomculo. Okwangoku, inomxholo onamandla kakhulu kwaye uyonwabisa, kwaye ngakumbi isindululo sevidiyo ekuvumela ukuba ube nomxholo omtsha ngokusekwe kwividiyo zakho ezazibukelwe ngaphambili kunye nezithandwayo. Ke ngoko TikTok Ikhawuntari ilapha ukukunceda ufumane ubomi, kunye nexesha langempela tiktok follower counts yeeakhawunti zakho, kwaye unokujonga ezinye TikTokInani labalandeli ngokunjalo.
Ukunyuka kunye nempumelelo yehlabathi TikTok
Ukudlula, inkampani yomzali ye TikTok, bathenga i-Musical.ly app ngo-2017, kwaye kamva bazama ukudibanisa zombini ii -app kwaye bayisungula njengeyunithi enye. IMusical.ly yayithandwa kakhulu eMelika, kwaye noluntu oluncinci lwalusebenza kakhulu kuyo. Inkqubo yomculo yayifana kakhulu TikTok, kodwa yapapashwa ngonyaka ka-2014. Emva kokuthenga iMusical.ly, i-Bytedance yenza imizamo emininzi yokudibanisa ezi nkqubo kunye, kwaye ekugqibeleni, bayibhengeza ngo-2018 ukuba ezi nkqubo zimbini ziye zaba yinto enye. Emva kweso sibhengezo, i TikTok Uluntu lwanda, kunye nezigidi zabasebenzisi abatsha abajoyina imimandla eyahlukeneyo yehlabathi. Inani labasebenzisi lenyukile ukusuka kwizigidi ezili-100 ukuya kwizigidi ezili-130 kwisithuba esifutshane seenyanga ezi-3.
Ayifani kakhulu nolunye ulwabiwo lokwabelana ngevidiyo okanye usetyenziso. Ukuba ufuna ukuqala ukusebenzisa TikTok, Kuya kufuneka uyikhuphele kwiVenkile, emva koko ubhalise ngokwakho ukuqala ukulayisha iividiyo ezizodwa nezonwabisayo. Akunyanzelekanga ukuba ubhalise ukuze ujonge iividiyo esele zilayishiwe. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba iminyaka yakho kufuneka ibe ngaphezulu kweminyaka eli-13 ngexesha lokubhalisa, kwaye kuya kufuneka ufumane imvume kumntu omdala.
Isikrini esiphambili siqukethe iividiyo zamva nje, kwaye uya kufumana ezona vidiyo zaziwayo kanye kwiscreen esikhulu xa uvula usetyenziso. Lonke uhlaziyo lwamva lwabantu obalandeleyo luya kubonakala nalapho. Insiza ikwafaka iphepha lokuKhangela, apho unokufumana khona umxholo omtsha, abantu abathile, kunye nee-hashtag ezijikelezayo onokuzithanda.
Emva kokubukela iziqeshana ezimfutshane, unganxibelelana nomntu ngokumnika into ayithandayo, alandele, okanye ngokwabelana nevidiyo yakhe. Ungathumela umyalezo kwaye uthethe nabo. Inqaku lamagqabantshintshi likuvumela ukuba unxibelelane nabanye abasebenzisi kwaye wabelane ngeengcinga zakho malunga nevidiyo.
ukusebenzisa TikTok follower count umlandeli ophilayo comparison
Kubalulekile ukubandakanya abaphulaphuli bakho ukugcina ukuthandwa kwakho kunye nokufumana abalandeli abatsha. Qiniseka ukuba ubaphendula kuzo izimvo okanye imiyalezo yabo. Unokwenza nezithuba zokubulela abalandeli bakho. Kubonakala ngathi yinto enzima ukuyenza, kodwa bubugcisa ukuba uyayiqonda, akukho mntu unokukuthintela ekubeni yinani 1 TikTok. Ngoku, ukuba ufumene abalandeli abaneleyo kwaye abantu bahlala bebukele iividiyo zakho, oko akunakuphepheka abalandeli bakho compare wena nabanye.
Esi sizathu sokuba senze i tiktok realtime yeyakho. Inceda abasebenzisi kunye nabalandeli bakho compare wena nabanye abachaphazeli. Ungayijonga ukuze wazi ukuba ngubani odibana ngakumbi nabalandeli babo. Ingasetyenziswa njengecebo lokukhulisa inani labalandeli. Ngamanye amaxesha, unokwazi ukujonga umntu okhuphisana naye kwaye uhlale uhlaziywa malunga nomxholo wakhe. Iya kukukhuthaza ukuba uvelise imibono emitsha kwaye wenze iividiyo ezizodwa nezinomdla.
Cinga ngokuphila ixesha nexesha kwaye zama okusemandleni akho ukunxibelelana nabalandeli bakho ngelixa usasaza. Yabelana ngamanye amaxesha ngobomi bakho, into oyenzayo, into oyithandayo nengayithandiyo, thetha ngeziganeko zamva nje, kunye nendlela izinto ezihamba ngayo esiphelweni sakho, kwaye uzame ukubonisa ukuba uhlala wonwabile ukunxibelelana nabalandeli bakho.
Okukhona abalandeli bakho becinga ukuba bayazi malunga nawe, kokukhona baya kuziva ngcono ngawe kunye neevidiyo zakho, kwaye ngenxa yoko, ukuthanda kwakho kuya kunyuka. Ukwenza bukhoma TikTok iiseshoni zinokukhohlisa, kodwa ukuba uziva unethemba lokudlala kwividiyo ebukhoma, abalandeli bakho baya kuyithanda ngokupheleleyo.
TikTok Follower Bala
TikTok Follower Bala yenza ukuba ujonge abalandeli abadumileyo TikToker simahla kunye nexesha langempela. Esi sisixhobo esifanelekileyo ukugcina iliso kwinani labalandeli. Uya kuba nakho ukujonga TikTok abalandeli bahlala ngokucofa nje kube kanye. Inkqubo ye- TikTok baphile abalandeli count iya kubonisa inani lokwenyani labalandeli bempembelelo yakho oyithandayo TikTok. Ukuba ujonga TikTok umqhubi comparison, live follower count TikTok ndilapha ukukunceda. Ungajonga abadali ngeevidiyo ezidumileyo kunye nabalandeli babo ngokunqakraza nje live counts, TikTok. TikTok baphile abalandeli Isixhobo siya kubala inani lakho owuthandayo TikToker ngexesha lokwenyani.
TikTok usetyenziso oludumileyo lweendaba zentlalo, apho abantu banokwabelana ngeevidiyo zabo ezimfutshane ngomculo ongasemva. Iividiyo zinokuhlelwa kwifayile ye- TikTok app, eyenza amava omsebenzisi nokuba abe mnandi ngakumbi. TikTok yenza iividiyo ezimnandi kunye nezobuchule. Unokufumana zonke iindlela zamva nje TikTok, iphepha elibhalwe "" For You "" liya kuhlala libonisa imixholo efanelekileyo kuwe. Sisithuba sabantu abancinci ukuba bonwabe kwaye banxibelelane nabantu abanokumamela. Ungahlala uhlaziyiwe kunye nenani lomlandeli wakho owuthandayo TikToker ngokunjalo. Inkqubo ye- Livecounts TikTok Inkonzo ifumaneka nge-24/7 kwaye kuyo yonke imimandla yehlabathi.
indlela live count TikTok Imisebenzi
TikTok ineebhiliyoni zabasebenzisi kwihlabathi liphela, uninzi lwabo luyasebenza kweliqonga leendaba zentlalo. Bahlala bejonga umxholo wamva nje kule app, kwaye iividiyo zihlala zifumana izigidi zeembono mihla le. TikTok follower count Unceda ukugcina iliso kwinani labalandeli be TikTok. Isixhobo esiluncedo sokuhlala sihlaziywa kunye nesithandwa sakho TikTokAbalandeli baka-er. TikTok baphile abalandeli Isixhobo silapha ukukunceda ngokujonga ukhuphiswano phakathi kwabadumileyo TikTokers. Ezininzi zidumile TikTokAbantu bazimisele ngokuqhubekayo ukuba yiNombolo 1 TikTok ngokufumana elona nani liphezulu labalandeli.
TikTok abalandeli bahlala uhlaziyo kwinani labalandeli ngexesha lokwenyani ukuze wenze comparisons. Abalandeli abaphilayo bayabala TikTok iluncedo ekufumaneni ezinye ezaziwayo TikTokErs, oko kuthetha ukuba uya kuba nomnye umthombo wokuqulathwe kuye. Live counts TikTok sesona sixhobo silungileyo sokufumana ulwazi malunga nabalandeli be TikTokNjengoko uza kuhlala ufumana inani elihlaziyiweyo labalandeli kwaye awuzukufumana kulibaziseka.
TikTok realtime isixhobo sinokusetyenziswa naphina, nanini na. Livecounts TikTok sisixhobo sasimahla, esenzelwe ngokukodwa abantu abafuna ukufumana abalandeli bexesha lokwenyani ukuba babale uhlaziyo ngaphandle kwetyala.
Kusetyenziswa kwanjani TikTok live count
Ungasebenzisa ngokulula yethu TikTok followers count; akukho ndlela zinzima zibandakanyekayo. Yonke idatha iyafumaneka ngonqakrazo olunye. Oyithandayo TikTokAbalandeli babala unqakrazo olunye kude. TikTok umlandeli count zihlala zingumlinganiso olungileyo wokujonga kwaye compare ukuthandwa TikTokaba. TikTok iyeyona ndawo isetyenziswa kakhulu yokwabelana ngevidiyo kule minyaka idlulileyo, kwaye ukuthandwa kwayo kusanda. Kuyabonakala kwinani elandayo labasebenzisi abatsha.
Kulindeleke ukuba inyuke nangakumbi, kodwa oko kuthetha ukhuphiswano ngakumbi lwabalandeli abalandelayo. Sele kuyindlela entsha yokufumana abalandeli abaninzi nangakumbi, abalandeli abaninzi bayakumela ukuba udume ngakumbi kwaye ufumane ukubhengezwa ngakumbi. Olunye ukhetho lokuvelisa ingeniso kwi TikTok iividiyo. Ke ngoko, ungajonga TikTok follower count phila apha ngaphandle kobunzima.
Akukho ntengiso zigqithisileyo okanye ubhalise iimfuno, unokungena nje kwiprofayili ye- TikToker, kunye neyethu tiktok live follower count TikTok Isixhobo siya kukufumanela inani labalandeli. Live counts TikTok yenziwe lula liqela lethu. Ukuba unomdla wokwazi malunga TikTok phila umlandeli Bala bukhoma kumdali wakho womxholo owuthandayo TikTok, ungayisebenzisa. Livecounts TikTok yenziwe yaba lula ukuyisebenzisa kunye nomsebenzisi-friendly interface.
Izibonelelo zokusebenzisa TikTok live follower count
TikTok ilawula ishishini elifutshane lokonwabisa ividiyo. Yaphehlelelwa ngombono wesicelo esifutshane sokwabelana ngevidiyo ngomculo ongasemva. Ukuthandwa kwayo kuye kwanda iindawo ezininzi kule minyaka idlulileyo. Abantu banomdla omkhulu kwizinto abazithandayo TikTokkwaye bafuna ukuhlala behlaziywa ngevidiyo zabo zamva nje. Njengamanye amaqonga eendaba ezentlalo, a TikTokUkuthandwa kuka-er kukulinganiswa ngokusekwe kubalandeli bayo. Iingxoxo zamva nje zijolise ekubeni ngubani inombolo 1 TikToker kwaye ngubani obambayo. Ukulungiselela le njongo, senze TikTok followers count.
Ungajonga kwaye uhlale unolwazi oluhlaziyiweyo malunga nenani labalandeli. TikTok abalandeli abalandelayo sisixhobo esifanelekileyo compare ukuthandwa ngabantu abadumileyo TikTokaba. TikTok idume kwihlabathi liphela, ungakhangela abantu abavela kwimimandla neenkcubeko ezahlukeneyo. Kugcwele ulonwabo kuba abantu abadala abakangeni kulo okwangoku. Ngenxa yoku, unokulandela kwaye uhlale uhlaziyiwe kunye nazo zonke iindlela. Unokufumana ukuthandwa TikTokNgokujonga inani labalandeli abanalo, ungayijonga neyethu TikTok abalandeli bahlala isixhobo. I live follower count TikTok kukucofa nje kude kusetyenziswe, akukho zintengiso zigqithileyo kunye nemibuzo yophando. Sinikezela TikTok baphile abalandeli idatha ngexesha lokwenyani. Eyethu live counts TikTok yinkonzo yasimahla yokusebenzisa.
Ngubani onokusebenzisa i livecount Tik Tok ikhawuntara?
Livecount Tik Tok abasebenzisi abanomdla kubuntu obudumileyo kwi TikTok uya kufumana TikTok followers count Isixhobo esiluncedo. Inani labasebenzisi abasebenzayo TikTok Iyanda imihla ngemihla, abaninzi abasebenzisi babukela iividiyo kwaye babhalisela TikTokmihla le. Inani labalandeli linokuchaphazela ukuthandwa ngumyili womxholo, kwaye linokusetyenziswa njengenyathelo ukumisela ukungqinelana kwakhe ekuthumeleni umxholo womgangatho. Unokujonga kwakhona utshintsho kwinani labalandeli abadumileyo nabazayo TikTokaba.
Abasebenzisi be-Android kunye ne-iOS banokusebenzisa i live count Tik Tok ikhawuntari kwiselula yabo. Kufuneka nje wazi iprofayili ye TikTokukufumana i TikTok follower count. Iinkonzo zethu ziyafumaneka kubo bonke abantu abanokufikelela ngokulula kwi-intanethi. Ayinamsebenzi nokuba usebenzisa ifowuni ephathekayo okanye ilaptop / PC. Senze iwebhusayithi yethu ukuba ifikeleleke kwaye ibe nomdla kubo bonke iintlobo zewebhusayithi. Ungagcina umlandeli wokubala idatha kwaye wabelane nabahlobo bakho ukuba bajoyine kolu hambo lokuvuya lokukhuphisana phakathi TikTokaba. TikTok phila umlandeli count iya kuhlaziya rhoqo emva kwesibini ukuze ube nedatha yakutshanje kunye nexesha langempela malunga nenani labalandeli.
Live count Tik Tok ubalo lwabalandeli
TikTok usetyenziso oludumileyo lweendaba zentlalo, uninzi lwabashukumisayo kunye nabantu abadumileyo abathumela iividiyo zemihla ngemihla. Kukho izigidi zabasebenzisi abasebenzayo TikTok. Ke, kunokwenzeka ukuba inani labalandeli kunye nezinto abazithandayo kwezi akhawunti ziya kuba nkulu ngokunjalo.
TikTok follower count Kubalulekile ukulinganisa ukuthandwa kunye nenqanaba lokunxibelelana nabalandeli. Ke ngoko, senze TikTok live follower count, iyakukunceda ufumane izibalo zamva nje malunga nobuntu bakho obuthandayo kunye neakhawunti yakho ngokunjalo. Ungajonga TikTok bala ukwazi okungakumbi malunga nokubala kwabalandeli kunye nezinto ozithandayo TikToki-er. Tik Tok live count sisixhobo esiluncedo ekufumaneni ulwazi malunga TikTok manani. Ungajonga inani labalandeli kunye nezinto ozithandayo ngokusebenzisa isimahla kunye ne-Intanethi TikTok follower count isixhobo.
Kusetyenziswa kwanjani TikTok follower count?
TikTok ithandwa kakhulu kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumajelo osasazo asekuhlaleni anezigidi zabasebenzisi abasebenza kuyo yonke imimandla yehlabathi. Isetyenziswa njengeqonga lokukhuthaza iimveliso kunye nentengiso yemidiya yoluntu.
Kuphantse kube nzima ukuba nohlalutyo lwedatha olusebenzayo ukusuka TikTok. Kodwa, ngoncedo lwethu TikTok ukubala komlandeli ungajonga elona nani labasebenzisi ababhalisele kuwe okanye ababukele umxholo wakho. Ngale nto TikTok count Unokwenza ngokulula TikTok Iinkcukacha-manani. Iya kukunceda ufumane idatha malunga nabalandeli ngonqakrazo olunye. Iqela lethu lifumene indlela yokulandelela amanani TikTok, kwaye sikwenze kwalula ukuyisebenzisa.
Ungajonga zonke izikhombisi ngokubhekisele kukuthandwa kweakhawunti yakho, ukusebenzisana, kunye nokubala kwabalandeli. Uya kuba nakho nokulandela umkhondo wokukhula kwejelo lakho kwaye uya kuba nakho compare kunye nabakhuphisana nabo. Ngale nto, unokufumana umbono malunga nokuma kwakho kukhuphiswano, ukuba ungaphambili kangakanani, okanye kufuneka wenze ntoni ukuze ubambe.
Njani TikTok count ingaluncedo kuwe?
Sinokukunceda ufumanise malunga TikTok Iinkcukacha zeakhawunti, njengokuthi zingaphi izibonelelo kunye nokuba zingaphi izinto azifumeneyo azifumeneyo. Unokufumana idatha malunga nenani lezimvo, inani lezabelo, ukufikelela kwiprofayili yomsebenzisi, kunye nenani leembono kwiividiyo, kunye namabali.
TikTok follower count iyafumaneka ukuba ufumane olu lwazi ngonqakrazo olulula. Unokufumana ukufikelela ngokulula TikTok live follower count kwiwebhusayithi yethu. Livecount Tik Tok counter kunokuba luncedo ukulinganisa inqanaba lokuzibandakanya kwesitishi esithile. Senze kwalula kumntu wonke ukufikelela kolu lwazi ngoncedo lwe TikTok live count.
Ukulandelwa kweenkcukacha-manani kukuvumela ukuba uchaze ngokuchanekileyo izithuba kunye nomxholo. Masithi, ubonisa iintengiso zeefowuni eziphathwayo kwaye ufuna ukwandisa ukuthengisa kwakho Livecount Tik Tok ukuthengisa. Ukhe wayibona imifanekiso yeefowuni eziphathwayo kwigumbi lokubonisa ngaphambili. Enye ingcali yokufota yathatha iifoto zeefowuni eziphathwayo.
Uveze ii-mobiles ukuba zikhanyise, kwaye waqhubekeka neefoto ukubenza babonakale ngcono. Kodwa uyathandabuza abantu baya kuba nenxaxheba ekubukeni imifanekiso yeefowuni eziphathwayo kwindawo emhlophe ecacileyo. Kwaye uceba ukuthumela ezinye izakhelo apho amantombazana ahamba esitratweni kunye neefowuni eziphathwayo ezandleni zabo, hlala phantsi kwikhefi- oko kukunceda abathengi abanokubakho bathathe isigqibo, kwaye ubonise ukuba imveliso yakho ijongeka kanjani ebomini bokwenyani. Ucinga ukuba licebo elilungileyo elo, kodwa umfoti akafani.
Uhlalutyo lweenkcukacha manani luyakunceda ukusombulula imbambano: upapasha iividiyo zamantombazana aneefowuni eziphathwayo ezandleni zabo kwiveki yokuqala, kwaye kwiveki yesibini uthumela ividiyo ecetyiswe ngumfoti. Ungavavanya esona sicwangciso silungileyo ngokusebenzisa TikTok follower count. Kulapho live count TikTok thanda ukubala komlandeli iza kukunceda kwiimeko zobomi bokwenyani. Jonga live countTikTok counter, inani leembono, ukuthandwa, kunye nezabelo ukumisela ukuba leliphi iqhinga elisebenza kakuhle kwiimveliso zakho.
TikTok live count iya kukunceda wenze uhlalutyo malunga livecount TikTok ukubandakanyeka kwaye ngokusebenzisa oku unokuvavanya ngokulula ukusebenza kwephulo lokwazisa eliqalisile ukukhuthaza iimveliso zakho. Okanye unokujonga kwakhona umsebenzi wengcali entsha, ukuba udlulisela ukusetwa kunye nokusebenza kunye neebhlogi.
Ungalukhulisa njani uthethathethwano kwi TikTok ngokusebenzisa Live count TikTok counter
TikTok ayisiyo iprofayile yakho yenethiwekhi yoluntu, ingaphezulu koko. Ewe, akukho mntu unokuthintela abahlobo ekutshintshisaneni ngeendaba. Sithetha ngokugcina umntu okanye ibhlog yeshishini kuyo TikTok. Oku akuyi kuchaphazela kuphela abo ubathandayo, kodwa nabantu ongabaziyo ngokunjalo. Ukuba umbono wakho wahlukile kwaye ubutsha ngoku kuya kuba lula ukuqhubela phambili. Kodwa xa sele ifunyenwe- ungayeki. Ihlala izama ngento esebenzayo TikTok. Kwaye ukubetha umlinganiso womxholo kunye nokuzibandakanya kombukeli.
TikTok ukubalaer inokukunceda ufumane real time manani malunga nabalandeli bakho kunye nokuzibandakanya. Unga TikTok live follower count kwiphepha lakho leshishini okanye iphepha lomntu. TikTok follower count ilula, ilula, kwaye inemilinganiselo efanelekileyo yokuthandwa kweprofayile yakho kwi TikTok. Ukuba unemibuzo efana nale: ukujonga njani Tik Tok ubalo lwabalandeli? Ke ukwindawo elungileyo, silapha ukukunceda ngale nto. Sinikezela real time TikTok live follower count. TikTok follower count iyafumaneka ukuba ujonge i-24/7.
Unokuba ngusomashishini njani kwi Tik Tok? Kananjalo ufuna umbono oqinileyo, omtsha, kunye nothengiso. Khumbula ubume bebhrendi, kwaye uthathe isigqibo sokuba ufuna ukuqhubeka njani. Hlala kwithoni yelizwi, okanye indlela ofuna ukuhambisa ngayo umyalezo wakho kubathengi abanokubakho. Ukuseta ixabiso lababhalisi: jonga izihloko ezinxulumene nemveliso yakho.
Nceda uqwalasele indlela abantu abakwi-2010 ababesebenzisa ngayo ukwenza iiposti ezinje nge "10 imibono yezinwele" kunye nokufumana amawaka okuthandwa. Abantu abazukubhalisela nantoni na abaza kuskrola ngayo. Phuhlisa umxholo wokubhala: phuhlisa uphawu lwentengiso okanye ukhethe isimbo sokubalisa amabali. Kwaye uphuhlise uluhlu lwezihloko onokufuna ukuxoxa ngazo nabaphulaphuli bakho.
TikTokRealtime.com ayihambelani TikTok
Akuvumelekanga © 2020 TikTok Realtime
umxholo ngokuthi UAnders Noren - Phakama ↑